Omume ime omume klas maka 2011 MacBook Pro | Esi m mac
Omume klas ime ikpe megide Apple n'ihe banyere MacBook Pro 2011 na eserese ọdịda
Jordi Gimenez | | Apple, MacBook Pro, Noticias, Mac kọmputa
Na mbido afọ a otu akụkọ bịara ozugbo metụtara MacBook Pro 2011 na ọdịda na GPU ya nke mere ka ndị ahụ metụta ọdịda eserese site n'oge ruo n'oge na igwe ha. Apple gbanwere ụfọdụ kọmputa ndị a n'ọtụtụ n'ime ndị emetụtara, mana obere ndị ọrụ wepụtara otu nsogbu ahụ ma ugbu a ikpe a nwere ike Kpee ikpe ma ọ bụrụ na Apple adịghị eme a aga ngwa ngwa.
Nke bụ eziokwu bụ na ụlọ ọrụ iwu Washington, Whitfield Bryson & Mason LLP, na-amụ okwu ahụ iji mepụta klas omume ikpe megide Apple mgbe na-achịkọta ihe ọmụma banyere ikpe n'etiti otu nke Facebook nke ndi emetutara onwe ha na ndi nwere ihe kariri ndi 2.300, na webusaiti ichikota mbinye aka change.org nke gafere akara 10.923.
E kwesiri iburu n'uche na Apple anaghị adaba na ikpe dịka nke a, na bụ, mgbe a onye ọrụ nwere nsogbu nke ụdị ọ bụla na ha Mac ma ọ bụ iOS ngwaọrụ, Apple zara ngwa ngwa idozi ọdịda. N'oge ụfọdụ, ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu nke ụlọ ọrụ ahụ ghọtara, ha na-azaghachi usoro mmemme ọzọ dị ka nke a hụrụ na MacBook Ikuku 2013 ma ọ bụ ọhụrụ na iPhone 5 chaja, ma na nke a MacBook Pro 2011 ha ka na-adịghị aza.
Kọmputa ndị a emetụtara sitere na 2011 ma tinyekwa ihe eserese Intel na njikọta na eserese ngosi sitere na AMD nke ụdị dị iche iche dabere na nhazi ahụ. Usersfọdụ ndị ọrụ ndị kwụọlarị ụgwọ maka nrụzi nke igwe ha metụtara na ọdịda eserese (ọbụlagodi ndị na-agụ blog otu esi eme ya Pablo) ha bụ akwadoro iji chekwaa akwụkwọ nrụzi a sị na Apple mepụtara mmemme nnọchi, ha ga-eweghachi ego ya niile.
Olileanya Apple ga-aza dị ka ọ dị na mbụ ma malite usoro a iji dozie ọdịda nke ụfọdụ igwe ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook Pro » Omume klas ime ikpe megide Apple n'ihe banyere MacBook Pro 2011 na eserese ọdịda
Ọ dị m mma, enweghị m ike ịkwụsị ịgụ ihe gbasara ndị nwere ahụhụ ahụ na Apple gbachiri nkịtị. I zutara onwe gi mac ka ihe ndia ghara ime. Enwere m mbubreyo 2011 ma obu ezie na o puru isi na ndi mbu ana m ama jijiji.
Zaghachi ka djdared
M nwere a MacBook 2010 na ọ na-enye m njehie mgbe na-ekiri vidio na itinye m Mac ọtụtụ ihe ...
Amaghị m ihe nsogbu ga-abụ ...
Ana m agwa gị na m nwere MacBook Pro Late 2011, ọ mere m izu ole na ole gara aga.
Ugbu a, enwere m Mac enweghị ike iji ya mee ihe, ọ na-anọ na akara apụl (ọ dị ka pixelated) ọ naghịkwa aga ebe ahụ.
M zụtara ya na March 2012 na nke ọma, enweghịzi m nkwa na site na ihe ha gwara m na nrụzi ahụ ga-efu m ihe dị ka $ 1400 n'ihi na a ga-agbanwe efere ahụ.
Enwere m mbubreyo '11 MBP na oge ọ bụla eserese ahụ dara, m na-ewepu mkpuchi ala, jiri ihe ọ bụla gbochie ya, gbanye ya ma chere ruo mgbe ọ kwụsịrị n'ihi ikpo ọkụ nke CPU. M kpọghee Fans ma mechie ya ọzọ.
Mgbe ị gbanyere ya ọzọ ọ na-arụ ọrụ zuru oke. Akwadoro ka ị jiri gfxCardStatus ma họrọ ihe jikọrọ ya ka ọ dịrị ogologo oge na-enweghị nsogbu.
Enwere m olileanya na ọchịchọ ahụ na-aga n'ihu na apụl na-enye azịza maka anyị niile nwere nsogbu a.
Zaghachi ka ọ dị
Etufuru m ihe ngosi nke ọnwa 3 mgbe ịzụrụ ya na 2011, yana afọ 2 mgbe m rụzighara ya n'okpuru akwụkwọ ikike ọ mebiri ọzọ.
APple na-atụ m ụjọ site n’ikwu na ha enweghị ike ime ihe ọbụla ma na ọ bụrụ na m etinye € 500 iji dozie ya, ha anaghị ekwe nkwa na ọ gaghị emebi oge nke atọ. Ezigbo izu ohi nke ika nke na-etu ọnụ ugwu ma na-egosi ọrụ ndị ahịa dị egwu.
Zaghachi na ANDRES GARCIA LOPEZ
Enwere m Mac Book Early 17 ″ nke, dị n'okpuru akwụkwọ ikike, ga-agbanwerịrị HD na eriri n'ihi na ọ nwere njikọ ọjọọ ma ọ bụ ihe dị ka nke ahụ na ndị agba abụọ ahụ n'ihi oke mkpọtụ. N’oge na-adịghị anya ka ngwụsị nke nkwa ahụ gachara, m ga-akwụrịrị and 600, ka ọnwa asaa gachara, e mebisịrị ya ọzọ, ka ọnwa atọ gachara, ọ dịka egwuregwu, mana mba. Amalitere m otu ihe ma ọ bụrụ na ị were ma ọ bụ kewaa ihuenyo na ọnya abụọ ma ọ bụ nke vetikal, na-acha anụnụ anụnụ ... wdg, na-agwụ na ịghara ịmalite. Anyị kwesiri itinye ego buru ibu na akụrụngwa kwesiri ịdị mma ma dịrị njikere ịrụ ọrụ na mmemme mmemme, nke bụ ihe m ji ma chọọ ịrụ ọrụ. Enwere m oke iwe, gịnị ka m na-eme mgbe ọ mebiri ọzọ na akwụkwọ ikike nke nrụzi 7 anaghịzi ekpuchi m? N'ihi na ọ dịghị mma na mgbe m gbanwechara efere ikpeazụ, enweghịzi m ntụkwasị obi maka mpempe ahụ, karịa na ọ pụtara na ha nọ n'ọnọdụ dị mma. Have ga-abịanye aka na arịrịọ maka Apple itinye ihe omume nnọchi ahụ nke ọ ga-emerịrị na kọmputa ndị ọzọ. Agaghị m atụkwasị obi na ika a ọzọ. Kọmputa ndị ọzọ na-abụghị Apple enyeghị m nsogbu ọ bụla.
(Na ha anọghị n'ọnọdụ dị mma) Ndo, enweghị m ike ide nke ọma.
Yabụ ọrụ ọrụ ntanetị n'efu na-agụnye mmezi kaadị eserese? Ha gwara m na Apple na ọ dara, na ọ ga-efu m ihe dị ka euro 500 ruo 600 iji dozie ya.
Zaghachi Elena R.
Ana m ekwu nke a maka usoro mmezi nke Apple mere ka ndị ọrụ nweta ya: http://www.apple.com/es/support/macbookpro-videoissues/
N'ebe a, anyị na-akọ akụkọ banyere mmemme a: https://www.soydemac.com/apple-lanzara-el-27-de-febrero-un-programa-de-reparacion-para-los-macbook-pro-de-2011-2013/
Azụrụ m macbook pro 15 na njedebe nke 2011 ma eserese ahụ apụla mgbe otu afọ gasịrị, ha gbanwere ya (eserese nke abụọ, nke bịara ụkpụrụ na nke a nke ha tinyere m) ka ụbọchị 15 gachara !!! Ana m ewere ya ma ha gbanwee ya. Mgbe afọ abụọ gachara ọzọ !!! Kedu ihe m ga-eme ugbu a? M ka nwere ọnwa abụọ iji kwụọ ụgwọ ebe m kwadoro ya maka afọ 5 !!! Ha hapu m dika nkita na akpa ego !!!
Apple na-ebupụta beta beta nke ọha maka OS X Yosemite 10.10
Otu esi edekọ oku Audio FaceTime